BAAQ TAAGEERO: Golaha guurtida Soomaaliyeed ee UK | HobyoNet.Com
Monday, July 2nd, 2012 | Posted by Hnet
BAAQ TAAGEERO: Golaha guurtida Soomaaliyeed ee UK
London-hobyonet)Anagoo ah Gollaha guurtida Soomaaliyeed ee UK waxaan marka hore halkaan tahniyad ugu direynaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogan munasabad 1da Luulyo oo ah maalintii aan xorriyada qadanay iyo israacii waqooyi iyo koonfur.
Marka xiga waxaan si buuxda u taageereynaa wada haddalada u dhexeeya Somalia iyo Somaliland ee lagu qabtay London iyo dhamaan qodobadii ka soo baxay shirkaas.
Waxaan kaloo aan si buuxda u taageereynaa kulanka taarikhiga ah ee labada madaxweyne Shiikh Sharif Shiikh Axmed iyo Axmed Maxamed Silanyo ku dhexmaray dalka Imaaraadka Carabta iyo saxiixa ay saxiixeen heshiskii London.
Sida aan la wada socono waa markii ugu horeysay ee labada dhinac (Somalia iyo Somaliland) si toos ah u wada hadlaan kaddib burburkii dawladii dhexe ee Somalia.
Waxaan aaminsanahay in wada hadalkaan bilowga ah mar hore loo bahnaa, haddana waa in horey loo sii wado si loo abuuro jawi wanaagsan oo ummaada looga fa’ideyn karo.
Waxaan ogsoonahay in dhibaatada Somalia iyo Somaliland aan dhawr shir lagu xallin karin oo aay muddo dheer u bahantahay, waxaanan ku talineynaa in la siiyo waqtigeeda.
Waxaan fileynaa in wada haddalkaani gogol xaar u noqdo dariiqii lagu gaari lahaa xal siyaasadeed oo waara, kaas oo Soomaalida u horseeda nabad, burwaaqo iyo baraare.
Waxaan ugu baaqaynaa maamulada kale ee dalka ka jira iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogto in wada haddaladaan bilowga ah la taageero, TFG-dana la siiyo kalsooni madama ay tahay tan na wada metesha loogana dambeeyo si jawi wanaagsan oo kalsooni, isfaham, degenaan leh loo abuuro.
Anaguna haddaan nahay odayaasha qurba joogta waxaan dadaal aan kala go’ lahayn u geleyna sidii isfahamka Soomaalida iyo isku soo dhawaanshaheeda uga shaqeeyno.
Afheynka Gollaha Guurtida UK
A W Abtidon (Ahmedgurey)